Wararka - Maxaad Dahabkaaga Luul marwalba u Xidhnayd?
Muxuu Dahabkaaga Luul Waligiis u Xidhaa?
Waxaa jiray war la soo sheegay oo ku saabsan kiis looga shakisan yahay kiiska qiimaha luul ee xarunta tijaabada dahabka: Mr. Chou wuxuu ku qaatay ku dhowaad USD1,500 inuu ku iibsado hal silsilad luul biyo macaan xaaskiisa, laakiin hal xagaa kadib, silsiladda luul ee xaaskiisu inta badan xirto hoos udhacay ku dhowaad 1.5mm, oo dusha sare wuxuu noqday mid aan sinnayn.
Mr. Chou wuxuu ka shakiyay inuu soo iibsaday been abuur, sidaa darteed wuxuu geeyay silsilad luul ah xarunta baaritaanka si loogu aqoonsado. Laakiin natiijada ayaa ka badisay filashadiisa. Natiijada qiimeynta waxay muujisay in luulku run yahay. Sababta sababta uu luulku u ruxmay ee uu u noqday mid aan sinnayn waa xirashada aan habboonayn iyo daxalka aashitada.
Qaybaha ugu waaweyn ee macdanta ka samaysan luul waa Aragonite iyo Calcite (qiyaastii 82% -86%), iyo sidoo kale 10% -14% keratin pearl iyo 2% qoyaan. Labada macdane ee ka samaysan luul waa kaalshiyam kaarboonayt (CaCO3), cufnaanta gaarka ah ee aragonite waa 2.95, adkaanta waa 3.5-4.0, culeyska qaaska ah ee calcite waa 2.71, adkeysiguna waa 3, marka luulku aad ayuu u jajaban yahay.
Sababtoo ah qaybta ugu weyn ee luulku waa kaalshiyamka kaarboonatka, marka luulku ay taabtaan walxaha aashitada leh (sida dhididka, biyaha tuubada, iwm), dusha sare ayaa waxyeelloobi doona. Sababtoo ah adkeysigeedu ma badna, isqabqabsiga walxaha adag qaarkood ayaa sidoo kale dhaawac u geysan doona luulka.
Intaas waxaa sii dheer, markii luulku la xiriiraan isha kuleylka ama isha dabka, si tartiib tartiib ah ayey u qalalaysaa, tartiib tartiibna u lumineysaa qoyaanka, iyo Aragonite ayaa loo beddeli doonaa calcite, taas oo keeneysa in luulku si tartiib tartiib ah u lumiyo dhalaalkiisa.
Haddii aad tahay qof jecel dahabka oo aad badanaa iibsato dahabka luul, waxaad ogaan doontaa in dahabku u baahan yahay in dib loo shaqeeyo oo qalabyada loo beddelo waqti aasaasi ah oo caadi ah.
Hadiyadaha Gabdhaha Freshwater Pearl, White Gray Freshwater Pearl, Aaa Biyo Macaan, Hilqado Aroos, Hilqado Pearl Pear, Dhalasho Dhab Ah Dhaqan Biyo Macaan,